Yakachipa 6016 aruminiyamu chiwanikwa kupisa kurapwa CNC machining zvikamu fekitori uye vanotengesa | Ouzhan
6016 aruminiyamu chiwanikwa kupisa kurapwa
Nheyo yealuminium alloy kupisa kurapwa
Chinangwa chikuru ndechekuvandudza michina zvimiro zvealloy uye kuwedzera kuramba. Ngura kuita, kunatsiridza kugadzirisa mashandiro, uye kuwana kuenzana kugadzikana.
Nyora kupatsanura kwealuminium alloy kugadzira yakakodzera kurapwa kwekupisa:
Aluminium alloys inogona kugadziridzwa kuitira simba, kugadzikana, uye zvimwe zvinhu nekushanda kunotonhora, kudzima, kukwegura, uye nzira dzekuwedzera. Zvinoenderana neichi chiitiko chekuvhiya kuti uwane zvivakwa zvinodiwa, iko kuvhiya kunodaidzwa kuti tempering kurapwa, uye kupatsanurwa kwekutsamwa kunonzi tempering mhando. Kazhinji kutaura, zvigadzirwa zvealuminium zvinogadziriswa zvakapatsanurwa muzvikamu zviviri: isiri-kupisa kurapwa mhando uye kupisa kupisa mhando: pure aluminium (1000 dzakateedzana), Al-Mn akateedzana chiwanikwa (3000 akateedzana), Al-Si akateedzana chiwanikwa (4000 akateedzana) uye Al-Mg Series alloys (5000 akateedzana) iwo asiri e-thermal alloys; Al-Cu-Mg akateedzana alloys (2000 akateedzana), Al-Mg-Si akateedzana alloys (6000 akateedzana) uye AlZ n-Mg akateedzana alloys (7000 akateedzana) ndezve Heat-kurapwa chiwanikwa.
Ouzhan yakagadzirirwa aruminiyamu chiwanikwa machining zvikamu chigadzirwa kuratidza
Ndeipi mhedzisiro yealuminium alloy kupisa kurapwa?
6063 aruminiyamu chiwanikwa ine yakanaka thermoplasticity, yakanakisa ngura kuramba uye yakanaka mehendi zvivakwa, uye zviri nyore kuti electroplated, saka inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemaindasitiri profiles, mapurani ekugadzira uye emagetsi radiator zvinhu. Zvichienderana nemamiriro ekushandisa echinhu ichocho, pane misiyano mikuru muzvigadzirwa zvekuita kwechigadzirwa. Semuenzaniso, epamusoro-mashandiro zvigadzirwa zvinoshandiswa mumagetsi base chiteshi kutonhora masisitimu ane akakwirira anodikanwa ekumusoro ngura kuramba kwezvinhu, uye mapurani mapuratifomu anoshandiswa pakakwirira-kusimuka keteni madziro masisitimu ari Iyo mapurasitiki uye simba zvinodikanwa zvezvinhu zvine mutsigo, izvo zvinoita kuti zvinyanye kukosha kukudziridza yakakwira-kuita aluminium alloy zvinhu. Mune yekutsvagisa uye nekuvandudza maitiro eaya aluminium alloys, kupisa kurapwa maitiro anoshandiswa munzvimbo zhinji kuitira kuti uwane irinani chimiro uye zvivakwa.
Pashure: Aluminium profile extrusion zvikamu
Zvadaro: Aluminium alloy radiator yakadzoserwa zvikamu